September 2011 - iftineducation.com
aadan21 / September 24, 2011
Jakarta- Madaxweynaha Falastiin Mahmud Abbas ayaa qaatay go’aan taariikhiya oo ku aadan raadinta xornimadooda. Abbas waxoo sitoos ah ugu codsaday Qaramada Midoobay iney aqoonsato falastiin wadan xubin buuxda ka ah Qaramada Midoobay. asagoon ujexan jexeynin kasoo horjeedka Israel iyo Mareykanka, Abbas waxow gacantiisa ugu dhiibay qoraalka formalka hoghayaha Qaramada midoobay Ban Ki-moon. Dalabka Abbas waxaa taageeray inkabadan 120 dal. Abbas…
Hadii dalabka dowlada Falastiinyinta la’aqbalo iney kamid noqoto xubinkatirsan Qaramada Midoobe, waxey kahelaayaan faa’ido badan dowlada Falastiin, waxaa kamid ah faa’idooyinka ugu weyn booska Falastiinyiintu lamid noqonmaayo midka Kasmir, Filipinta koonfureed iyo Thailanta koonfureed. Intaan ka aheyn jiritaanka dowlada falastiinyiinta, faa’idada kale ee uleedahay inay kamid noqdaan xubin qaramada midoobay waxa weeye nasiib iney uyeelankarto iney kamid noqdaan falastiinyiinta xubnaha…
aadan21 / September 16, 2011
LONDON- Mudo kooban afarsano dib udanbeyso, isticmaalka internetka ee qadka tabletka iyo telefonada gacanta ayaa lasheegay iney qadka kasaari doonaan isticmaalka internetka ee qadka PC ga, sida lagu sheegay cilmi baaris cusub. Sida lagu qooray PC Advisor, Arbaco (14/9/2011), dunida PC ga sidaas ay tahay wali qadka kama bixin laakiin waxaa lasheegay in cimrigeeda kaharay maalmo latiriyo. Maxaa yeelay cilmi…